ကိုနိုင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
>Wedding Fair 2011
>Nobel Aye; We are politcal prisoners in Burma, the Regime is lying to the World
Posts Tagged ‘ ကိုနိုင်း ’
ကိုနိုင်း၏ “ခေတ်ပြိုင်ထဲက အနာဂတ်”(ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့် -၄ ) (သူရိယနေ၀န်း ဂျာနယ်) မိုးမခ၊ မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ သူရိယနေဝန်း–Vol 1.No 140. 11 March 2017 မှဖော်ပြပြီးဆောင်းပါး-စာရေးသူခွင့်ပြုမှုအရ။ ကျွန်တော်တို့က...
ပြတင်းတံခါးအဖွင့်ဇာခန်းဆီးအလွင့်(၃) ကိုနိုင်း – နွေဦးရာသီရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်သံ သူရိယနေဝန်း–Vol 1.No 139.4March 2017 မှဖော်ပြပြီးဆောင်းပါး-စာရေးသူခွင့်ပြုမှုအရ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ နွေဦးရာသီကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ နွေဦးရာသီရဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ကာလမှာရှေးဘုရင်များ လက်ထက်က စစ်ခင်းဖို့အတွက် စစ်ချီသံတွေ ကြားခဲ့ရပါ...